सबैलाई थाहा छ कि संसारको ल्याप्टप भन्दा कम कामको लागी थप सुविधाजनक मोबाइल उपकरण छैन। वास्तवमा, तिनले एक स्थिर कम्प्युटरको कार्यक्षमता र स्मार्टफोन र ट्याब्लेट जस्तै पोर्टेबल ग्याजेटहरूको गतिशीलता संयुक्त। यद्यपि, अन्तिम दुई प्राविधिक दृष्टान्तहरू, कार्यक्रम कोड वा ज्वालामुखी पाठसँग काम गर्न सक्दैन। तर तपाईंले ल्याप्टपमा सक्नुहुन्छ।
हामीले बिर्सनु नसक्ने एकमात्र चीज हो कि ल्याप्टप प्रबंधनको शर्तमा एक विशेष उपकरण हो। जो कि डेस्कटप पीसीबाट मात्र सारियो, यो टचप्याड र एउटा सानो कीबोर्डमा प्रयोग गर्न सजिलो हुनेछैन। विशेष गरी यो असुविधाजनक हुनेछ यदि तपाईं थाहा छैन कि ल्यापटपमा टच माउस जडान कसरी गर्ने र यो माउसको साथ प्रयोग गर्ने।
टच माउस के हो?
त्यसोभए, केहि चीज असक्षम गर्नु अघि, तपाईंले टचप्याडको अवधारणाको प्रश्न खोल्नु पर्छ (वा टच माउस, जस्तै यो यन्त्र सरल तरिकामा भनिन्छ)। सबै पछि, हरेक प्रयोगकर्ता जसले ल्यापटपसँग काम सुरु गर्दैन यो मोड्युलको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन।
जब तपाइँ पहिलो पटक ल्यापटप देख्नुहुन्छ, तपाइँका आँखाले स्क्रिनको पछाडि स्क्रिन खोल्छ, साथै आफैंको हेराइको शीर्ष प्यानल। यसमा एक किबोर्ड छ (जस्तै कि डेस्कटप कम्प्यूटरको साथ आउँदछ), र यसको भित्र - एक सानो आयताकार क्षेत्र, फ्रेम वा रंग द्वारा हाइलाइट गरियो। यो टचपेड हो। यो उनको बारेमा हो कि हामी कुरा गर्नेछौं, र अधिक विशेष गरी, ल्यापटपमा टच माउस अक्षम गर्ने।
यो स्क्वायर फिल्डको साथ, प्रयोगकर्ताले कम्प्युटरलाई त्यहि तरिकामा नियन्त्रण गर्न सक्दछ जुन उसले यसलाई पारंपरिक माउस संग गर्दछ। टचप्याड क्षेत्र अन्तर्गत, त्यहाँ कुञ्जीहरू पनि छन् जुन पोर्टेबल माउसको बायाँ र दायाँ पङ्क्तिबद्ध अनुकरण गर्दछ। यही छ, हामी भन्न सक्छौं कि नियमित माउस प्रदर्शन गर्दछ जब टच फिल्डको साथ काम गर्ने कार्यहरू पनि उपलब्ध छ।
यद्यपि, सबै कुरा सजिलो छैन। एक ल्याप्टपमा टच माउस जडान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नले आफैलाई एक भौतिक माउस किन्नु र स्क्वायर बक्स प्रयोग गर्न इन्कार गरे। र समस्या उत्पन्न हुन्छ जब एक व्यक्ति पाठ टाइप गर्न को लागी कोशिश गर्दछ र लगातार सेंसर माउस को छूता छ, कर्सर को दस्तक दिछन। विश्वास गर्नुहोस्, यदि यो कामको समयमा हुन्छ भने, यो धेरै असुविधा हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, प्रयोगकर्ताले टच माउससँग काम गर्न सक्षम हुन सक्छ, र यो विश्वासपूर्वक गर्नुहोस्। छोटो समयका लागि ल्यापटपमा कसरी टच माउस जडान विच्छेद गर्न आवश्यक छ, उदाहरणको लागि, जब चलचित्र देखाउँदै (क्रममा, फेरि यो क्षेत्रलाई गलतीमा छुन नदिने) वा प्रस्तुतीकरण गर्न। सामान्यतया, वास्तवमा, अवस्थाहरू जहाँ यो ज्ञान काममा आउन सक्छ, धेरै धेरै। त्यसकारण, फरक नोटबुक मोडेलहरूको लागि टचप्याड असक्षम गर्नको लागि धेरै विकल्पहरू विचार गर्नुहोस्।
हटkeyहरू अक्षम पार्दै
त्यसोभए, गरौं, सम्भवतः सबै भन्दा साधारण तरिकाको साथ। यो पनि सरल हो (यद्यपि यो असंभव छ कि अन्य भित्रीहरू जटिल छन् भनी भन्न असम्भव छ)। यस जानकारीको साथ, तपाईलाई थाहा छ कसरी टच माउस लाई लिनक्सो ल्यापटपमा (र न केवल) मा दुई कुञ्जी थिचेर। यी तथाकथित ह्याकिजहरू - सञ्चालनत्मक बटनहरू छन्, जुन तपाइँले टोलीका ल्यापटप दिन र केहि कार्यहरू गर्नका लागि सेकेन्डमा दिन सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक यन्त्रमा (लेनोवोमा - कुञ्जीपाटीको तल्लो कुनामा र अन्य ल्याप्टपहरूमा यो कुञ्जीहरू F1-F12 नजिकैको हुनसक्दछ) एक विशेष बटन हो जुन एफएनको रूपमा साइन इन गरिएको छ। यसको अलावा, स्वयं बटनहरू मा, जुन F1-F12 को रूपमा नामित गरिएको छ, त्यहाँ त्यहाँ अन्य प्रतिमाहरू छन्। यदि तपाईं नजिकैबाट हेर्नुभयो भने, तपाइँ ब्याकलाइट प्रतीकहरू, वाइफाइ, खेलाडीलाई नेविगेट गर्नका लागि कुञ्जीहरू देख्नुहुनेछ र अन्य। टचप्याडको लागि पनि एक प्रतीक (आयतसहित, दुई भागहरू तल र एक रेखा जसले सबैलाई क्रस बाहिर)। यी "हट" कुञ्जी हुन्, र तिनीहरू सजिलो छन्, यदि तपाईं कसरी थाहा छैन कसरी, HP ल्याप्टप (र अरु धेरै) मा टच माउस अक्षम गर्न। एकैसाथ टचप्याड प्रतीक र Fn बटन थिच्दै, तपाइँ टच माउस बन्द गर्नुहुन्छ।
बटनको प्रयोग गरेर टचप्याड असक्षम पार्नुहोस्
केही कम्प्यूटर मोडेलहरू, ह्याकुकी बटनहरूसँग थपमा, टचप्याड क्षेत्रमा एक विशेष कुञ्जी पनि छ जुन टच माउसको सञ्चालनको लागि जिम्मेवार छ। यदि तपाईं थाहा छैन कि कसरी हाई कुञ्जीको संयोजन प्रयोग गर्ने र डेल ल्याप्टपमा टच माउस असक्षम गर्ने थाहा छैन, र यस्तो बटन तपाईंको मोडेलमा उपस्थित छ, तपाई सुरक्षित रूपमा यसको लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई आवश्यक छ टचप्याड चालू हुँदा सूचनाको लागि थिच्नुहोस् र प्रतीक्षा गर्नुहोस्। मार्गद्वारा टच प्यानलको विच्छेदन, त्यहि तरिकामा गरिन्छ।
BIOS मार्फत बिच्छेदन गर्दै
माथि दुई विकल्पहरू तपाईको ल्याप्टपमा एकीकृत नियन्त्रण प्यानल निष्क्रिय गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ। यद्यपि, त्यहाँ स्थिति हुन सक्छ जब तिनीहरू काम गर्दैनन्। उदाहरणका लागि, यो सञ्चालन हुन सक्छ जब यो हुन सक्छ, र टचप्याड र ह्याककुण्डहरू चलाउन जिम्मेवार चालकहरू लोड हुनेछैनन्। सोनी वाइओ ल्याप्टपमा टच माउस कसरी अक्षम पार्ने बारेमा (यद्यपि यो निर्देशन अन्य मोडेलहरूमा लागू हुन्छ), हामी अहिले लेखिरहेका छौं।
त्यसोभए, यस विधिको लागि, हामी BIOS मेनुमा जानु आवश्यक छ। तपाईंले पुन: सुरुवात पछि यो गर्न सक्नुहुनेछ। यो मेनुमा बाहिर निस्कने कुञ्जी थिच्न आवश्यक छ (विभिन्न मोडलको लागि यो फरक बटनहरू, प्राय: डील, F2 वा F12)। स्क्रिनमा क्लिक गरेपछि, मेनु फरक ट्याबहरू र उप-वस्तुहरूसँग देखा पर्नेछ। तपाईलाई आवश्यक छ प्वाइजिङ उपकरणमा जानुहोस् (टच पोइन्टरको अर्थ) र यसको सञ्चालन मोड चयन गर्नुहोस् - ऑन वा अफ ("अन" वा "बन्द")। अर्को, तपाईंलाई बचत र बाहिर निकल्नुहोस् बटन क्लिक गर्नु पर्दछ (प्रायः यो F10 कुञ्जी हो)।
BIOS मेनु छोडेर तपाई र तपाइँको ल्यापटप सफलतापूर्वक रिबुट हुनेछ।
टचप्याड कसरी सही तरिकाले व्यवस्थित गर्ने?
निस्सन्देह, कम्प्युटरमा टचप्याड खोल्न अन्तिम तरिका अत्यन्तै गाह्रो छ र असुविधाजनक कारणले ल्याप्टप रिबुट गर्न र BIOS मेनुको अपरिचित प्रयोगकर्ताहरू प्राप्त गर्न समावेश गर्दछ। सहमत हुनुहोस्, एक वा दुई बटन थिच्न सजिलो छ (माथि वर्णित योजनाहरूको अनुसार)। यद्यपि, यस तरिकाले यन्त्रको अपरेन्सन कन्फिगर गर्न, तपाइँले उपयुक्त ड्राइभहरू स्थापना गर्नु पर्छ। यो सफ्टवेयर हो जसले मोडलबाट आउँदै गरेको आदेशमा प्रतिक्रियाको लागि उत्तरदायी हुनेछ (यस अवस्थामा यो टचप्याड र ह्याट्रिक चालक छ)।
सामान्यतया, लगातार आफ्नो टच प्यानल को मोड को स्विच नहीं गर्न को लागी, तपाईं यसको ठीक देखि यसको संचालन को विन्यास गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ यसलाई निरन्तर प्रयोग गर्नुहुन्छ र पहिले नै भौतिक माउसको कमीमा आदी भएको हुनुभयो, त्यसपछि टचप्याड सधैँ असुविधा हुने छैन (बेशक, माथि उल्लेख गरिएका अवस्थाहरू)। यदि हामी माउससँग काम गर्ने कुरा गर्दै छौं भने, तपाइँ टचप्याडको आवश्यक पर्दैन, र तपाइँ यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी BIOS मा जानुहोस् र यसको क्षमताहरू सही रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
आईफोनको लागि रिंगटोन कसरी बनाउने?
हल्का ग्यासहरू। हाइड्रोजन, अक्सीजन र नाइट्रोजनको विशेषताहरू
कार्ड चक्कु: एक स्टाइलिश सहायक र असामान्य उपहार